Ịhọrọ usoro ihe omume | December 2019
Software iji hazie òké
Na Windows, enwere ngwá ọrụ dị mfe ma dị irè maka ịhazi nkiti. Otú ọ dị, ọrụ ya ezughị ezu maka ngbanwe zuru ezu nke njedebe nke manipulator. Iji chegharịa bọtịnụ niile na wiilị, ọtụtụ ihe omume na ụlọ ọrụ dị iche iche, a ga-atụle ụfọdụ n'ime ha na ihe a.
Ụlọ ọrụ kachasị mma maka ịhazi ụdị draịva na disks
Na usoro nke na-arụ ọrụ na kọmputa, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọrụ ọ bụla nwere nsogbu ndị dị ka ịkpụpụta disks na draịva flash. Na ileba anya mbụ, ọ dịghị ihe dị egwu n'ebe a, mana ọ bụghị mgbe niile ngwá ọrụ nhazi maka disks disks na-enyere aka. N'okwu a, ị ga - enweta "ọrụ" nke mmemme ndị ọzọ.
Nyochaa ihe omume iji mee ka kọmputa gị dị ngwa
N'agbanyeghị ojiji usoro Windows arụmọrụ dị mma, n'oge na-adịghị anya, ụdị dịgasị iche iche nke njehie nwere ike ime nke ga-eduga ọ bụghị naanị na arụmọrụ na-ejighị n'aka, kamakwa iji belata na ọsọ nke kọmputa ahụ. Omume dịgasị iche iche nke onye ọrụ nwere ike iduga otu ntụgharị ahụ, site n'aka ndị kachasị achọpụta ihe, nyocha dị iche iche na usoro ahụ.
Nghazi software imepụta ihe
Mgbe ịmalitere nrụzi, ọ dị mkpa ilekọta ọ bụghị nanị maka ịzụta ngwá ụlọ ọhụrụ, kamakwa ịkwadebe ọrụ tupu oge eruo, nke ga-arụpụta nkọwa zuru oke nke ime n'ọdịnihu. N'ihi ụba nke mmemme pụrụ iche, onye ọrụ ọ bụla ga-enwe ike ịmepụta mmepe onwe ya nke imepụta ime.
Mmemme iji kwụsị mmemme n'oge
Ugbu a, e nwere mmemme ndị na-ejikwa onwe ha rụọ ọrụ ụfọdụ nke usoro ahụ mgbe ọnọdụ zutere. Ngwaọrụ dị otú ahụ ga-agbanyụ usoro ihe omume ahụ ma ọ bụ Os dịka ọnụọgụ nke onye ọrụ ahụ si. N'isiokwu a, anyị ahọrọla ọtụtụ ndị nnọchianya maka gị ma nyochaa ha n'ụzọ zuru ezu. Ụra ụra Onye nnochite anya mbụ n'ime listi anyị nwere ike ịkwụsị kọmputa ma ọ bụ zipụ ya ka ụra ma ọ bụ gbanyụọ usoro ihe omume ahụ.
Nchịkọta akụkọ nyocha
Achọrọ ịchekwa oge mgbe ederede ederede? Onye nnyemaaka na-apụghị ịgbanwe agbanwe ga-abụ nyocha. A sị ka e kwuwe, ka ịdee peeji nke ederede, ị ga - ewe 5-10 nkeji, ma ịgụ nyocha na - ewe naanị 30 sekọnd. Maka nlezianya dị elu na ngwa ngwa, a chọrọ usoro inyeaka. Ọrụ ya kwesịrị ịgụnye: na-arụ ọrụ na ederede na ihe osise, na-edezi foto depụtaghachiri na ichekwa ya na usoro achọrọ.
Mmemme maka nhicha RAM
RAM (RAM) nke kọmputa na-echekwa usoro niile na-agba ọsọ na ya ozugbo, tinyere data nke usoro nhazi ahụ. N'izu, ọ na-adị na ebe nchekwa ebe nchekwa (RAM) na na faịlụ a na-akpọ paging (pagefile.sys), nke bụ nchekwa nchekwa.
Mmemme maka ịgụ akwụkwọ eletrik na kọmputa
Ịgụ na-eburu ọnọdụ dị mkpa ná ndụ nke ọtụtụ ndị mmadụ, ma ọ bụghị mgbe niile ka a na-ahụ ebe maka akwụkwọ akwụkwọ nkịtị. Akwụkwọ akwụkwọ dị mma n'ezie, ma akwụkwọ kọmputa dị mma karị. Otú ọ dị, na-enweghị mmemme maka ịgụ * .fb2, kọmputa agaghị enwe ike ịmata usoro a. Ihe omume ndị a ga-enye gị ohere imepe akwụkwọ na *.
Ngwa kachasị elu iji belata egwu
Mkpa ịkụda abụ nwere ike ibute n'ọnọdụ dị iche iche. Ikekwe ịchọrọ ịtinye ngwa ngwa na vidiyo, ị ga-achọ ya iji mejupụta vidiyo dum. Eleghị anya ịchọrọ ngwa ngwa nke egwu maka ihe omume ụfọdụ. N'ọnọdụ ọ bụla, ịkwesịrị iji usoro ahụ iji belata egwu ahụ.
Software maka ibipụta akwụkwọ na ngwa nbipute
O nwere ike iyi ka mbipụta akwụkwọ bụ usoro dị mfe nke na-anaghị achọ ihe omume ndị ọzọ, n'ihi na ihe niile dị mkpa maka mbipụta bụ na nchịkọta ederede ọ bụla. N'ezie, ikike ịnyefe ederede gaa na akwụkwọ nwere ike ịmekwu nke ọma na ngwanrọ ọzọ.
Mmemme maka FPS ụba na egwuregwu
Onye ọ bụla na-eme egwuregwu ga-achọ ịhụ ihe dị mma ma mara mma n'oge egwuregwu ahụ. Iji mee nke a, ọtụtụ ndị ọrụ dị njikere ịkụnye ihe ọṅụṅụ niile na kọmputa ha. Otú ọ dị, site na ntughari akwụkwọ, ị nwere ike imebi ya. Iji mee ka ọ ghara imebi ihe, ma n'otu oge ahụ na-eme ka ọnụ ọgụgụ dịkwuo elu na egwuregwu, ọtụtụ usoro dị iche iche dị.
Ndepụta nke mmemme iji melite ogo video
Ọ bụghị mgbe niile ka igwefoto dị oké ọnụ nwere ike ịse video kachasị elu, n'ihi na ọ bụghị ihe niile dabere na ngwaọrụ ahụ, ọ bụ ezie na ọ na-arụ ọrụ dị mkpa. Ma, ọbụna vidiyo a na-agba na igwefoto dị ala nwere ike ịme ka mma ka o wee sie ike ịmata ọdịiche dị na ya site na vidiyo nke dị na ọnụ. Isiokwu a ga-egosi usoro kachasị ewu ewu iji meziwanye mma vidiyo.
Mmemme maka ịgụ akwụkwọ djvu
Akwụkwọ eletrik aghọwo onye kwesịrị ekwesị na akwụkwọ ndị a na-ebipụta akwụkwọ: ọ dị mfe ịchọta ha site na Ịntanetị, ha na-enwe ike ịnwetanwu, mgbe mgbe ha nwere onwe ha ma ọ bụ dị ọnụ ala karịa akwụkwọ ha analog. Otu n'ime usoro ndị a na - edepụta na kọmputa - djvu - ọ dị mwute ikwu na, ọ bụ ihe arụmọrụ nke arụmọrụ na - enweghị ike ịmatakwu ya, ya mere a chọrọ usoro pụrụ iche iji lee faịlụ na usoro djvu.
Mmemme iji gbochie mgbasa ozi na ihe nchọgharị
Ịntanetị bụ ụlọ nkwakọba ihe nke ozi bara uru. Mana dịka iwu, yana ọdịnaya anyị nwere mmasị na ya, anyị na-anwa ịmanye ngwaahịa na ọrụ dịgasị iche iche dịka ụdị ọkọlọtọ na-egbuke egbuke na windo mgbasa ozi. Enwere ike ikpochapụ mgbasa ozi? N'ezie. Nke a bụ ihe ndị na-egbochi ndị na-egbochi ya iji mee ihe. Ndị na-akwado mgbasa ozi, dịka iwu, nwere ụdị abụọ: n'ụdị ntinye ihe nchọgharị na n'ụdị mmemme kọmputa.
Best free analogues nke Total Ọchịchị faịlụ njikwa
A na-ewere otu onye isi na-achịkwa ka ọ bụ otu n'ime ndị njikwa faịlụ kachasị mma, na-enye ndị ọrụ ọrụ zuru ezu nke atụmatụ nke usoro a kwesịrị inwe. Ma, ọ dị mwute ikwu na okwu ikikere nke ọrụ a na-egosi nkwụ ụgwọ ya, mgbe otu ọnwa nke ọrụ ikpe n'efu.
Analogs nyocha nchọgharị uhie
Otu n'ime ihe nchọgharị kachasị ewu ewu maka Ịntanetị na-amaghị aha bụ ihe nchọgharị Nchọgharị Tor. Ọ bụ ya bụ onye mara ọsọ ọsọ karịa ọtụtụ n'ime ndị asọmpi ya ma ka na-enwe ọkwá. Mana ọtụtụ ndị ọrụ adịghị amasị ọsọ ọsọ na-agba ọsọ, ha na-achọ ndị ogwu Thor Browser, ha na-agbalị ịchọta usoro nke ga-enye ọbụna nchebe, amaghị aha na ọsọ.
Atụmatụ atụmatụ atụmatụ
Onye ọ bụla na-arụ ọtụtụ ọrụ n'ụbọchị. Ọ dị ezigbo mkpa ịghara ichefu ihe ọ bụla ma nwee ohere ịtụrụ ime, mana ịme ihe niile dị n'isi gị dị ezigbo ike. Mee ka ndụ dịkwuo mfe maka mmemme pụrụ iche maka ịme atụmatụ. Ha ga-enye aka kesaa omume, ịhazi ma dozie ha, yana ichetara gị nzukọ dị mkpa ma ọ bụ ihe ndị ọzọ.
Software maka kaadị vidio AMD kpuchie
Iwechi ma ọ bụ overclocking PC bụ usoro nke gbanwere mgbanwe nke nhazi nke ihe nhazi, nchekwa ma ọ bụ kaadị vidiyo iji melite arụmọrụ. Dị ka a na-achị, ndị a na-eme nke a na-agbalị idebe ihe ndekọ ọhụrụ, mana site na ihe ọmụma kwesịrị ekwesị, nke a ga-ekwe omume ọbụna maka onye ọrụ ọ bụla.
Mmemme maka ịmepụta disk diski
Disks dị mgbagwoju anya bụ emulated ngwaọrụ nke ị nwere ike mepee diski disk diski. Ya mere a na-akpọ na faịlụ ụfọdụ mgbe a gụsịrị ozi site na mgbasa ozi. Ihe na-esote ga-abụ ndepụta nke mmemme ndị na-enye gị ohere ịṅomi draịvụ na diski ngwanrọ, yana ịmepụta ihe oyiyi na eserese.
Ọ bụghị otu Everest: ngwanrọ maka nchọpụta PC
Ịlele ozi gbasara kọmputa gị, nyocha na nyocha bụ usoro dị mkpa maka ndị ọrụ ahụ nyochaa steeti kọmputa ha. Enwere mmemme pụrụ iche maka nke a, ihe kachasị ewu ewu bụ Everest. Isiokwu a ga-elele ngwanrọ ngwanrọ dị iche iche na-anakọta ozi gbasara kọmputa.